Sida loo sameeyo $ 500 dheeraad ah bishii: 15 Siyaabood oo loo sameeyo Lacag caddaan ah -
Bogga ugu weyn Sida loo sameeyo $ 500 dheeraad ah bishii: 15 Siyaabood oo lagu sameeyo Lacag caddaan ah
Dhammaanteen waxaan rajeynaynay in lacag si sixir ah ugu muuqato akoonnadayada bangiga markii aan aad ugu baahnayn, taas oo ah wax aan macquul ahayn, laakiin horay u hambalyeeya! Just by weydiinaya su'aashan muhiimka ah; sideen u samayn karaa $ 500 dheeraad ah bishii? Waxaad hadda ku biirtay kooxda kuwa hagaajin doona booskooda maaliyadeed oo gaari doona xorriyadda maaliyadeed.
Sida iska cad, samaynta £ 500 si joogto ah bil kasta waxay qaadataa waqti ka badan intaad kasban lahayd £ 100, laakiin waxay ku siin kartaa xorriyad aad u badan.
Dhab ahaantii, waxaad heli kartaa lacag aad ku caawiso biilasha, maalgeliso gadashada baabuurka, maalgaliso fasax ama aad kasbato dakhli dheeraad ah.
Sababtaas awgeed ayaan u soo saaray liiskan 15 siyaabood oo la hubo oo lagu kasban karo lacag caddaan ah oo dheeri ah. Kani waa liiskii ugu ballaadhnaa ee siyaabaha loo sameeyo $ 500 dheeraad ah bishii.
Kahor intaanan sii socon, waxaan jeclaan lahaa inaad xasuusato xigashadan Jim Kwik
“Aqoontu waa awood: Had iyo jeer waad maqashaa, laakiin aqoontu ma aha awood. Waa awooda kaliya ee iman karta. Waxa kaliya oo ay noqotaa awood markaan adeegsano oo isticmaalno.
Qof akhriya buug oo aan ku dhaqmin wax faaiido ah kuma laha qof aan waxna qorin waxna akhriyin.
Midkoodna ma shaqeeyo ilaa aad shaqayso mooyaane. Waa inaan kaalinteenna ka qaadannaa. Haddii ogaanshaha uu yahay dagaalka badhkiis, ficilku waa qeybtii labaad ee dagaalka. ”
Markaa aan galno qeybtii hore ee dagaalka.
1. SUUQA XIRIIRKA:
Suuqgeynta ku -biirintu waxay la socotaa gacmo -gashiga baloogga, laakiin uma baahnid inaad yeelato baloog si aad u noqoto mid.
Adigoo ku taliya alaabta iyo adeegyada dhagaystayaashaada warbaahinta bulshada, waxaad kasban kartaa lacag. Muhiim ma aha in la helo dhagaystayaal jireed si lacag loo helo iyada oo loo marayo suuq -geynta xiriirka.
Taa bedelkeeda, dhagaystayaashaadu waxay fiiriyaan websaydhka aad u tilmaamayso adeeg gaar ah, oo waxaad helaysaa boqolkiiba marka ay halkaas wax ku iibsadaan.
Websaydhada lagu bilaabayo suuq -geynta xiriirka waxaa ka mid ah:
Goobaha suuqyada oo ay ku jiraan xulasho kala duwan oo baayacmushtariyaal ah oo aad kor u qaadi karto iyada oo ku saleysan waxa xiisaynaya dhagaystayaashaada.
Shabakadda xiriirka la leh CJ waxay ku jirtay warshadaha in kabadan 20 sano. Geedi socodka iyo bixinta $ 1.8 bilyan oo ah lacag -bixinnada xiriirka la leh mareegtooda sannad kasta, oo ka dhigan $ 15 bilyan oo cajiib ah iibka sannadlaha ah.
Madasha CJ waa mid sahlan oo sahlan in la dejiyo, waxay bixisaa warbixin dhammaystiran oo waqtiga-dhabta ah ah, waana mid lagu kalsoonaan karo marka la eego lacagaha billaha ah.
3. URURKA AMAZON
Ku dhawaad ​​qof walba wuu yaqaan Amazon. Goob suuq ah oo aad ka dalban karto wax kasta nacnac ilaa diyaarad aan duuliyaha lahayn oo si buuxda u shaqaysa saacado gudahood ayaa laguugu keenay albaabkaaga.
Maaddaama Amazon ay leedahay xulasho kala duwan oo badeecado ah, waa meel fiican oo laga bilaabo ganacsi Suuq -geyn Affiliate ah.
Sidoo kale akhri: Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lagu Bixiyo Si Loogu Qoro Faallooyinka Amazon 2022
SHABAKOOYINKA XIRIIRKA AH EE KALE OO BILAABAYA
Soo iibso affiliate Barnaamijka.
Rakuten Suuq- Xulafooyin
JotForm affiliate Barnaamijka.
Barnaamijka Wada -hawlgalayaasha Leadpages.
2. QORAALKA XORIYADDA:
Haddii aad ku raaxaysato qorista ama sheekaynta, Ka fikir inaad ka shaqayso guriga sida qoraa madaxbannaan. Tusaale ahaan, Contena qoraayaasha madaxa -bannaan waxay kasbadaan $ 45 saacaddii. Waxaa jira goleyaal badan, goobo, ama baloogyo aad ka heli karto fursado qoritaan oo iskood ah.
Kani waa hab kale oo lagu sameeyo $ 500 dheeraad ah bishii
Shabakadaha si aad u bilowdo:
1. Xusuus -qorka Dakhliga:
Shabakad u heellan inay lacag ku sameyso internetka. Waxay ku kala bixisaa $ 200- $ 500 maqaal si wanaagsan loo qoray oo la aqbalay.
Websaydh wadaag-wadaag ah oo bixiya $ 100 Maqaallada la aqbalay.
3. Si fiican ayaan u shaqeeyaa:
Ilaha shabakadda ee xirfadlayaasha HR iyo shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee bixiya $ 200 maqaal kasta oo la aqbalay.
Platform -kan wuxuu ku siinayaa marin u helka qoraayaal madax -bannaan oo khibrad leh si aad u amarto shaqadaada.
Meel fantastik ah oo loogu talagalay qorayaasha doonaya inay ka helaan $ 500 dheeraad ah bil kasta ama ka badan qoritaankooda iyo kuwa wax qora ayaa raadinaya inay shaqaaleeyaan qoraayaal tayo sare leh.
OTHER QORAALKA XORIYADDA SHAQOOYINKA LAGU BILAABO
3. BUUXI SAHANKA WAQTIGA KHAYRKA:
Dad badan ayaa u jeestay sahanno si ay u helaan dakhli dheeraad ah waqtiga firaaqada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad qaadato sahanno hore si loo hubiyo inaad u qalanto.
Markaad hesho sahan kasta oo aad xaq u leedahay, waxay ku bixin karaan si qurux badan.
Haddii aadan diyaar u ahayn inaad geliso waqtiga aad qashinka dhex mariso oo aad samayso sahanno aad u badan oo lacag badan, tani ma aha lacag-sameeye aad u weyn.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa Prolific, Swagbucks, iyo CashBack-Research, oo laga yaabo inaad maqashay.
Kaliya ma bixiyaan kharashka sahanka; waxay kaloo bixiyaan ciyaaraha iyo dukaamaysiga intarneedka.
Sidoo kale akhri: 7 Siyaabood oo lagu helo mushaharka aadista iskuulka | Dakhli dadban oo hubaal ah
Waxaad ku bilaabi kartaa:
Cilmi -baadhayaashu waxay u adeegsadaan samaynta cilmi -baarista jaamacadda ama daraasadaha shaqada. Dakhligaaga waxaa go'aamiya inta jeer ee aad sahan qaadato! Waxaa lagu siin doonaa ugu yaraan $ 6.50/saacaddii wakhtigaaga oo aad ku bixisay sahannada ku saabsan Prolific.
Waxaad ka heli kartaa dhibcaha Survey Junkie adiga oo sahan qaada ama ka qaybqaata barnaamij la yiraahdo SJ Pulse.
Survey Junkie waxay la socotaa dabeecadahaaga onlaynka ah, sida bogagga aad booqato, xayeysiisyada aad aragto, iyo xogta wax iibsiga markaad ka qaybgasho SJ Pulse.
Survey Junkie waxay samaysaa cilmi -baaris suuqa si ay u ururiso faham ballaaran oo ku saabsan hab -dhaqanka macaamiisha internetka.
Raadinta shabakadda iyo dhammaystirka hawlaha maalinlaha ah ee dhijitaalka ah waxay ku kasbataa dhibco, laakiin faahfaahinta lacag bixinta lama yaqaan.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad ku kasbato $ 10 ama ka badan, waxaad awoodi doontaa inaad lacag caddaan ah ku bixiso PayPal ama kaarka hadiyadda u siiso tafaariiqlaha aad dooratay.
OTHER KALA DUWAN SHAQOOYINKA LAGU BILAABO
Baaritaano Summad leh (MintVine)
Cilmi baarista Vindale
Tiro sii kordheysa ee hooyooyinka guriga jooga iyo ardayda ayaa u jeesanaysa umeerin onlayn ah si ay u soo saaraan $ 500 dheeraad ah ama ka badan bil kasta.
Wax -baridu waxay noqon kartaa hab fantastik ah oo lagu kasban karo xoogaa lacag dheeraad ah haddii aad ku raaxaysato waxbaridda dadka.
Wax -baridda waxaa lagu heli karaa ficil ahaan maado kasta oo la malayn karo, oo ay ku jiraan xisaabta, fiisikiska, xirfadaha kombiyuutarka/software, akhriska, Ingiriisiga, iyo wixii la mid ah.
Kuwaas waxaad ku samayn kartaa $ 500 dheeraad ah bishii.
Review Princeton The
5. Naqshadeynta Garaafyada:
Farshaxanada qaddarinaya abuurista walxaha naqshadeynta garaafyada sida astaamaha, astaamaha, iyo sawirrada ayaa ku habboon fursaddan.
Shabakad cajiib ah
La xaddidi karo
6. BIXINTA CUNTADA:
Haddii aadan ku dhex noolayn god, waxaad u badan tahay inaad ka warqabto xulashooyinka cunto -bixinta badan ee la heli karo. Uber Eats, Postmates, GrubHub, iyo DoorDash waa wax yar oo ka mid ah adeegyada gaarsiinta cuntada badan ee la heli karo.
Si ay u siiyaan adeegyadooda, dhammaantood waxay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha gig. Si ay cuntada u gaarsiiyaan macaamiisha, waxay u baahan yihiin darawallo la isku halleyn karo.
Waxaad kasban kartaa $ 500 dheeraad ah bishiiba qiyaastii 5 ilaa 10 saacadood toddobaadkii haddii aad haysato wakhti firaaqo maalintii (gaar ahaan qadada ama cashada).
7. FAAFINTA EBOOK:
Qorista iyo daabacaada eBooks waxay kaa caawin kartaa inaad hesho dakhli dheeraad ah adoo ka caawinaya dadka kale inay noqdaan kuwo guuleysta.
Kani wuxuu noqon karaa dakhli fiican oo dadban marka maqaalka la daabaco.
8. Abuur koorso ONLINE ah:
Samaynta koorso onlayn ah waxay la mid tahay qoritaanka eBook.
Tusaale ahaan, koorsada wadaagista shaashadda oo ay ku jiraan tababarka fiidiyaha iyo socod-socodka aalad softiweer gaar ah ayaa ah badeecad weyn oo la iibiyo haddii aad ku fiican tahay.
Tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee loo sameeyo $ 500 dheeraad ah bishii.
Waxaad bilaabi kartaa ganacsi dhinac ah sida sawir qaade haddii aad isha ku hayso tallaal weyn. Hal kalfadhi ayaa ku kacaya inta badan sawir qaadayaasha, waan ogahay $ 500 ama ka badan, sidaa darteed ganacsigan dhinacani aad buu u fiicnaan lahaa inuu sameeyo nolol dheeri ah.
Si aad u noqoto sawir -qaade xirfad leh maanta, uma baahnid fasalo sawir qaadis ah.
Markaad horumariso xirfadahaaga sawir qaadista, waad soo qaadan kartaa sawirro yaab leh oo si fudud u iibin kartaa.
Xagee Laga Bilaabaa:
10. NAASAHA GUDAHA
Weligaa ma eegtay guddiyada Pinterest oo ay ka buuxaan qurxinta guriga ee quruxda badan? Taageerayaasha HGTV waxay ku beddeli karaan riyooyinkooda run ahaantii annaga oo kaashaneyna.
11. HANTI DHAB AH:
Hantida ma guurtada ahi waxay bixisaa dakhli ku dhow xad aan xad lahayn haddii aad waqtiga u hurto barashada.
In kasta oo shaqada qaarkood loo baahan yahay bilowga, haddana waxay noqotaa mid waqti dhaaf ah. Dhulka dhulka (maalgelinta ugu yar ee $ 10) ama Fundraise (maalgelinta ugu yar $ 500) labaduba waa meelo aad u fiican oo aad ka bilaabi karto haddii aad rabto inaad ka booddo shaqada oo dhan oo aad geliso lacagta dheeraadka ah si ay kuugu shaqeyso.
Iyada oo buuqan dhinacan ah, waxaad samayn kartaa $ 500 dheeraad ah bishii.
12. Iibinta alaabta gacmaha:
Miyaad taqaanaa sida loo sameeyo alaabada gacanta lagu sameeyo sida dahabka, dhoobada, bacaha, ama waxyaabaha qowmiyadeed?
Waxaad ku iibin kartaa alaabtaada meelo kala duwan oo waxaad samayn kartaa $ 500 dheeraad ah bishii.
13. DHAQANKA AUDIO:
Ma ogtahay sida ay tani u fudud tahay? Waa wax fudud sida dhegeysiga maqalka iyo u beddelidda dukumintiga ereyga. Uma baahnid inaad noqoto qof hal -abuur leh ama sameeya baaritaan kasta.
14. BILAABIDDA GOOBTA E-GANACSIGA
Goobta e-commerce waxay damacsan tahay inay ku xirto soo-saareyaasha iyo soo-saareyaasha macaamiisha.
In kasta oo aadan heli doonin lacag aad u badan sida Amazon, eBay, ama Alibaba, waxaad awoodi doontaa inaad hesho xoogaa lacag ah bil kasta. La xiriir iibiyeyaasha lagu kalsoon yahay ka dib markaad abuurto degel.
Adeegso habab kala duwan oo suuqgeynta dhijitaalka ah, sida Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO) iyo Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada, si aad u ballaariso sumaddaada (SMM) oo aad u sameyso $ 500 dheeraad ah bishii.
15. TALOOYINKA VIDEOGA
Soo -saareyaasha maadada, fiidiyaha ayaa si isa soo taraysa caan u ah. Qofna waa inuu wax ka beddelaa muuqaalkaas oo dhan. Haddii aad haysato qalab iyo software ku habboon, waxaa laga yaabaa inaad si fudud u suuqgeyso adeegyadaada oo aad kasbato $ 500 Bishii ama ka badan.
Marka laguu qoro shaqo waqti-dhiman ah, waxaad yeelan doontaa dakhli fiican. Inaad qof kale u shaqayso ma aha mid lagu farxo, laakiin waxay ku siin doontaa waayo -aragnimo aad u qiimo badan.
DHALINYARADA RABTA INAY SAMEEYAAN BILOOD $ 500 DHEER, HALKAN KA FIIRI
1. Noqo YouTube Blogger Fiidiyow:
Xaddiga lacagta ah ee dhallinyaradu YouTubers ka helaan dakhliga xayeysiiska ee YouTube -ka waa mid yaab leh.
Kanaalka YouTube wuxuu caadi ahaan kasbadaa meel kasta $ 1 ilaa $ 20 kunkii aragti si dakhligu u noqdo mid la taaban karo.
Tani waa sida loo sameeyo $ 500 dheeraad ah bishii.
Samee gaarsiinta pizza
Shaqada dhalinyarada caadiga ah. Xaqiiqdii waxaad u baahan doontaa Liisankaaga tan.
Akhri: Lacag ku bixi si aad ugu xayeysiiso Baabuurkaaga: 7 Shirkadood oo ku siin kara 2022
2. Dukaanka raashinka:
Mar walba waxaa jira boosas laga heli karo dukaamada raashinka, markaa waxaad fursad fiican u heli doontaa inaad mid soo degto haddii aad dalbato.
3. Ka shaqee habka Hel warqad
Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn shaqada ugu xiisaha badan, ma taqaanaa? Waxaa lacag lagu siiyaa jimicsiga inta aad dhegeysanayso muusikada.
4. Shaqada tafaariiqda
Haddii aad wax badan ka dukaamaysato dukaan gaar ah, maxaad isku daydaa inaad shaqo ka hesho halkaas?
5. Masraxa filimada
Kani waa mid kale oo caadi ah, waana wax lagu farxo maxaa yeelay waxaad ugu horrayn la shaqayn doontaa dadka ku dhow da'daada.
Tan, waxaad ku samayn kartaa $ 500 dheeraad ah bishii.
SHAQOOYINKA KALE OO LAGU EEGO IN LAGU SAMEEYO $ 500 BILOOD
Hagaajinta & Gawaarida Gawaarida:
Ka qaado e-mootooyinka
Weelasha Dib -u -warshadaynta & Dhalada:
Dib -u -warshadaynta Qashinka Birta:
Ku Iibi Alaabta Craigslist, Tijaabada Isticmaalaha eBayDo Online
Sameynta $ 500 dheeraad ah bishii si cad uma adka sida dadka badankiisu aaminsan yihiin. Ma aha marka ay jiraan fursado badan oo lacag-samaynta oo kaliya sugaya in la ogaado.
Top 10 Strippers ugu mushaarka badan adduunka | 2022
GameStop waa shirkad Fortune 500 ah iyo tafaariiqle tafaariiqle badan oo caalami ah kuwaas oo ujeeddadoodu tahay ciyaaraha fiidiyowga,…
15 Side Gigs oo kaa dhigi kara inaad ka taajirsan tahay shaqo waqti buuxa ah
Samaynta lacag dheeraad ah oo dhinaca ah waxay noqon kartaa mid fudud haddii aad taqaanid waxaad raadinayso. Helitaanka mid…
Ma jiraan wax garaaca inaad ku raaxaysato dhalashadaada adigoon kharash garaynin dime. Qaadashada kaararka iyo ubaxa qoyska iyo…